Amerika Avaratra · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Janoary, 2019
Mahazo Onitra Sy Tombontsoa Ny Minisitra Nanoloana Ilay Tranonkala Zambiana Mpanaratsy
Etazonia 28 Janoary 2019
Teo anoloan'ny Tribonaly Amerikana, nenjehin'ny minisitra lefitra Zambiana misahana ny Varotra noho ny fanalàm-baraka ny vohikala Zambiana Kachepa360. Atahoran'ireo mpanakiana hiatrika zavatra mitovitovy amin'izao atsy ho atsy ireo tranonkala media an'olontsotra mitatitra momba ny fihetsiky ny governemanta.
Etazonia: Ny vokatry ny famoretam-pihetsiketsehana anti-G20
Nampiantrano ny fihaonambe G20 tamin'ny volana lasa (22-25 aogositra) i Pittsburgh, izay voamaloky ny hetsi-panoherana sy ny fomba mampiady hevitra nanakanan'ny manampahefana ny mpanohitra tamin'ny alàlan'ny Twitter.
Nataon'i Trump nanafin-tava tamin'ny tanany avokoa ny tao Afghanistan tamin'ny fananiham-bohitry ny Sovietika tamin'ny taona 1979
Afganistana 14 Janoary 2019
"Tafajabaka ao anatiny isika. Fiafaran'ny tantara."
Mamelona indray ny fiteny Inuktitut ao amin'ny media sosialy
Kanadà 14 Janoary 2019
Niditra media sosialy ny Fikambanana Qikiqtani Inuit (QIA) mba handrisika ny fampiasana bebe kokoa ny Inuktitut, fiteny Inuit. Miorina ao amin'ny faritr'i Qikiqtani (Baffin) ao Nunavut, faritany tanora indrindra ao Canada, miasa mba "hiaro, hitantana sy hampandrosoana ny zo sy tombontsoan'ny Qikiqtani Inuit" ny fikambanana .
Barbada: Mihamarefo ny Baolina Kitra ao Karaiba
Karaiba 05 Janoary 2019
Mihamarefo ny Baolina Kitra ao Karaiba araka ny fanehoankevitry ny bilaogera iray monina ao Barbada.
Voaràra avy any Etazonia ny bilaogy ThinkProgress avy ao amin'ny tambajotra miaramila amerikana ao Baghdad
Etazonia 05 Janoary 2019
Voarara ao amin'ny tambajotra miaramila amerikana ao Baghdad ny bilaogy liberaly ThinkProgress.
Etazonia : Fanehoankevitry ny tontolon'ny Twitter tamin'ny lahatsoratra iray nosoratan'i Nicholas Kristof momba ny finoana Silamo tao anatin'ny New York Times
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 03 Janoary 2019
Niteraka onjam-panehoana hevitra tao amin'ny tontolon'ny Twitter androany ny matoandahatsoratra nosoratan'i Nicholas Kristof. mpanao gazety ao amin'ny New York Times Ao anatin'io tsanganan-dahatsoratra io no ametrahany fanontaniana raha toa ka antony maha-"hondrankondrafana" ny ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra ny finoana Silamo. Nanehoan'ny mpamaky hevitra ny nisafidianana io teny io ho entina mamaritra io faritra io.
Etazonia 01 Janoary 2019
Ny asakanton'i Ótaes dia “mifantoka manodidina ny tsy rariny mianjady amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba tompotany sy ireo tantara voakosoka na voavily lalana any amin'ny faritra afovoany andreana sy ny faritra Appalachian,"